DISTRIKAN’ AMBATO BOENY : Tsy andrin’ny vahoaka ny higadonan’ny filoha Andry Rajoelina any an-toerana
Manatanteraka fitsidihana isaky ny distrika amin’izao fotoana izao ramatoa solombavambahoaka eto Mahajanga voafidy tamin’ny alalan’ny vondrona Mapar, Rahantanirina Lalao na i Ninah sy ireo mpiara-dia aminy ao amin’ny Tgv Mapar eto Boeny. 19 septembre 2018
Ny distrikan’i Ambato Boeny iray manontolo no nanombohana izany ny talata teo. Tao amin’ny foiben-toerana misy ny Tgv Mapar ao an-toerana no nanaovana ny fihaonana. Navoitran-dRamatoa solombavambahoaka tamin’izany fa tsy manavaka saranga ny Mapar sy ny Tgv fa ny olona rehetra dia miara-dia amin’ny filoha Rajoelina avokoa. Tsy manavakavaka ny filoha Rajoelina, hoy izy ary tahaka izany ihany koa ireo ekipa miaraka aminy. Ny vahoaka kosa izay nandray fitenenana dia nilaza fa tsy andrin’izy ireo ny fahatongavan’ny filoha Rajoelina ao an-toerana.
Efa vonona mantsy izy ireo hampandany ity kandida laharana faha 13 ity. Maika mihitsy izy ireo ny hahita ny filoha Rajoelina mba hahafahana mitaraina ireo olana mianjady amin’izy ireo amin’ny fiainana andavanandro. Raha ny ao Ambato Boeny mantsy dia ny tsy fandriampahalemana sy ny haratsian-dalana no tena mampikaikaika ny mponina any amin’izao fotoana izao, ka ny filoha Rajoelina irery ihany no nambaran’izy ireo fa vahaolana afaka mamaha ireo olana goavana ireo.
Raha ny fantatra dia amin’ny andro faharoa anombohan’ny fampielezan-kevitra ity kandida laharana faha 13 ity, no ho avy any an-toerana dia ny 09 oktobra 2018. Na mbola ho ela aza izany dia efa miomana fatratra ny mponina hihaona aminy raha ny ao Ambato Boeny sy ny manodidina azy no asian-teny. Taorian’i Ambato Boeny renivohitra moa dia nidina avy hatrany tao Madirovalo ireo delegasiona ireo mba hametraka ihany koa ireo solon-tena’ny mpikambana avy amin’ny Mapar sy Tgv, izay olona efa vonona hatramin’izay hampandany ny filoha Rajoelina.